Nhau - Kumaruwa kwakashatiswa dzimba kutamiswa ndeimwe yemapurojekiti ekutsvagisa simbi mamiriro ekugara
Kuvaka simbi mamiriro ekugara ndiyo yekumaruwa seismic kuita, ipfupi yekuvaka nguva, yakakwira maindasitiri, kuchengetedza simba, inogadziriswazve, nezvimwe, zvinoenderana nenyika yenyika yekusimudzira pfungwa uye kuvaka kwesosi-inoponesa nzanga nhungamiro nhungamiro.
"Dzimba dzekumaruwa dzakaputsika dzimba simbi imba yekutsvagisa dzimba".
Zvivakwa zvesimbi mumutengo wakasanganiswa padhuze neiyo nguva uye mutoro zvichaderedzwa nechetatu. Kunyanya kune yakasarudzika mamiriro echisikirwo ekuchamhembe kwakadziva kumadokero, simbi mamiriro ekugara haazove sezvivakwa zvechinyakare zviri panjodzi nemamiriro ekunze, sekureba sekunge fekitori inogadzira zvinodiwa zvinhu, uye wosarudza yakakodzera nguva yekuvaka inogona kuiswa pa- saiti.
Kurumidza kusimudzira kuvakwa kwesimbi simbi chivakwa ndechekusimudzira shanduko uye kukwidziridzwa kweiyo indasitiri yekuvaka kuti ibudirire yazvino yeiyo indasitiri yekuvaka chinhu chakakosha kugaya kwesimbi yakawandisa kugona, kuumbwa kwesimbi nzira yekuchengetera chakakosha chiyero. Kumaruwa kwakashatiswa dzimba kutamisirwa ndeimwe yemapurojekiti ekutsvaga kwesimbi yayo mamiriro.
Parizvino, yakagadzira uye yakagadzira 90 mativi emamirimita kusvika mazana matatu emamirimita edzimba dzesimbi kuchamhembe kwakadziva kumadokero, nzvimbo yekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero uye kuvaka nyowani kumaruwa. Yakave yakagadzirwa kubva pakuumbwa, kugadzirisa, pasi, uye kusangana. Hupfumi hwenyika hune hushamwari uye hunokurumidza. Nhanho inotevera mukuvakwa kwesimbi simbi yekutsvagisa nekusimudzira, kuvandudza nyowani yekugadzirisa uye tekinoroji yekuvaka panguva imwe chete, Gansu Construction Investment ichave iri mu2016 kuGansu Kuvaka Investment Nyowani 100,000 metres yemakiromita emakamuri-ekumusoro ekuzvivakira. mapurojekiti ese anoshandisa chimiro chesimbi, kuburikidza neKudzidzira kupfupisa ruzivo, kuti uenderere mberi nekusimudzira kugadzirwa kwemaindasitiri edzimba kumaruwa.
Magetsi Angle Simbi Towers, Prefab Simbi Zvivakwa, Tube Simbi Sisitimu, Kanzuru yeKutaurirana kweMasipare, Magetsi Angle Simbi Shongwe, Angle Simbi Simba Rinofambisa Shongwe,